Te-hanomboka amin'ny alalan'ny famakiana ny sasany teny nalaina. Koa henoy tsara fotsiny, ary mieritreritra raha ianao na tsy miombon-kevitra amin'ny zava-nanao hoe:.
"Ihany ny hatezerana mitoetra ao an-tratran'ny adala." - Albert Einstein
"Fohy ny hatezerana dia fahaverezan-tsaina." - Horace
"Na inona na inona no nanomboka tamin'ny fahatezerana mifarana amin'ny henatra." - Benjamin Franklin
"Aza manao na inona na inona [ny fahatezerana], fa ho manao ratsy ny zava-drehetra. " - fanovana
Ny fahatezerana dia tsy iray amin'ireo toetra isika, matetika maniry. Tsy misy olona tia fahatezerana. Ny fahatezerana dia mitarika ny mangidy sy ny fananana lolom-po. Ny fahatezerana ratsy mitondra any amin'ny fanapahan-kevitra. Hatezerana indraindray na dia mitondra any amin'ny herisetra. Matetika ny olona no tsy te-ho manodidina ny olona izay mety manidina eny ny tahony amin'ny fotoana rehetra. Toa somary miovaova.
Fa eto ny ny fanontaniana: no tezitra? Misy zavatra izay afaka ny Andriamanitry ny izao rehetra izao mandevy adala? Tsara Heveriko fa ny andinin-teny io hariva Hamaly io fanontaniana.
Tsy voatery ho miverena amiko. ao amin'ny Eksodosy 17, ny olona Isiraely maka fanahy an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny manao zavatra toy ny raha tsy matoky Azy. Rehefa avy ny zava-drehetra dia ny nataony ho azy ireo, mahatonga azy ireo ny vahoakany, nanolotra azy ireo tamin'ny fanandevozana, manome ho azy ireo sy ny sisa, dia mbola tsy matoky Azy. Koa dia miady tamin'i Mosesy ka lazao aminy mba hanome azy rano. Izy ireo nanontany azy hoe nahoana Izy nitondra azy tany an-efitra ho faty. Dia manontany tena ny fanontaniana, "Moa ny Tompo eto amintsika na tsia?"
Ary izao no karazana mimenomenona sy mitaraina nanome tsiny an'Andriamanitra izay mampiavaka ity taranaka ity. Fast fatratra Numbers 14, fanindroany, efa tahaka ny miverimberina tapaka tantara, indray mandeha indray izy ireo ka nanao hoe: mitaraina fa ho tsara kokoa ho hiverina tany Ejipta. Izy ireo tsy natoky an'Andriamanitra mba hanafaka azy sy hitandrina ny fampanantenany.
Ity Salamo mitondra ho ao an-tsaina na ireo tantara manokana. Ary ny andininy mampiseho antsika ny valin-ny tsy fahampiam-pitokiana Aminy.
Miverena hiaraka amiko ho any Salamo 95:10-11.
Fa efa-polo taona aho dia tezitra tamin'izany taranaka; hoy aho hoe, "Izy ireo no Olona maniasia amin'ny fony mania,ary tsy mahalala ny lalako. "Dia nanambara ny fianianana tamin'ny fahatezerako, "Izy dia tsy hiditra amin'ny fitsaharako mihitsy izy."
Isika dia handeha handinika fohy telo-kevitra tao amin'ity andinin-teny ity hariva.
Henoy indray ny lahatsoratra. hoy Andriamanitra, "Fa efa-polo taona aho dia tezitra tamin'izany taranaka…" Tsara Heveriko fa mamaly ny fanontaniana mazava tsara tarehy. Andriamanitra no tezitra. Ary izany ny fahotan'ny olony izay mampahasaro fahatezeran'i ity. Fa tsy mieritreritra tokony hisy misy mahagaga eto fa an'Andriamanitra ny fahotany nanao tezitra. Toy izao no Andriamanitra mamaly amin'ny ota.
Mitombo ny tsara aho, dia nanana ray, izay feno fitiavana sy hihaino ary nanana fifandraisana tsara tsara tarehy. Fa izaho tsy nahalala ihany izay tena toe-po dia handeha ho ao. Noho izany ny ankizy izay te hahazo zavatra ka handeha toerana, I karazana nahatsapa toy ny tsy maintsy milalao ny lalao. Tsy mbola nanontany azy ho zavatra, I karazana nanandrana hahatsapa azy avy, ka jereo ahoana ny toe-po izy tany. "Ahoana bout ireo Cowboys, Dada? Ny hihety volo antoka mijery tsara. "Ary ireo fanontaniana feeler no hanampy ahy hahalala raha tokony hanontany azy aho izao, na tatỳ aoriana. Fa ny fomba tsy tonga lafatra. Ary rehefa nanontany mihitsy aho ahalalanao izay tena raha mety hamaly amim-pifaliana ("Antoka, zanak'i!") na ny fahatezerana ("Mandehana outta ny tavako, zanak'i!"). Izy ampoizina toy izany.
Eny ary tsy tokony hanantena izany karazana unpredictability an'Andriamanitra. Andriamanitra miasa amin'ny fomba tsy takatry ny saina. Noho izany Andriamanitra dia ampoizina amin'ny fomba maro, fa misy na inona na inona ampoizina momba ny valin'ny fahotana. Tsy misy manesika ny fahatezerany. Nampanantena i Adama sy Eva, dia ho faty izy ireo raha tsy mankatò Azy. Noho ny fahotana Nosokafany ny tany ka nandatsaka ny olona amin'ny alalan'ny hidina any Sheola in Numbers 15. Ary ny zava-nitranga in Nasiana firesahana tsy mivantana ao amin'ny Salamo, Andriamanitra indray mandeha indray Mamaly amin'ny fahatezerana. Mampahasaro fahotana ny fahatezerana.
Raha ny marina, ny andian-teny izany nadika I tezitra tamin'izany taranaka, dia midika ara-bakiteny kokoa "I nahafoy izany taranaka izany." Izany no fandikan-teny maro milaza. Izany mampita sary ity ny rikoriko. Andriamanitra no Naharikoriko amin'ny 'ity vahoaka ity noho ny fomba efa nanandra-tena. Noho izany mba hamaly ny fanontaniana, Andriamanitra tsy tezitra ary namaly ny fahotan'ny ny taranaka teo aloha tamin'ny tezitra, masina, rikoriko.
Ankehitriny dia fantatro Mety, hamafàny hamely ny olona sasany ny foto-kevitra avy amin'Andriamanitra. mieritreritra izy ireo, "Tsara izany tsy Andriamanitro ianao miresaka momba. Andriamanitro ô Tsy tezitra. Andriamanitro fa tsy milaza izany. "Eny dia mety ho marina. Angamba ny andriamanitra tsy milaza fa, fa ny Andriamanitry ny Baiboly fotsiny no eto amin'ity lahatsoratra.
Dia toy izany ny olana misy eto? Ahoana no afaka ny tonga lafatra, Andriamanitra masina toy izany hatrany hamaly amin'ny fahatezerana tezitra ary na dia rikoriko? Raha tapaka namaly ny vadiko tamin'ny fahatezerako sy ny Nivazavaza amin'ny azy, izay ho fahotana mahatsiravina eo amin'ny anjara. Ny fahatezeran'i, anefa, dia tsy mpanota toa antsika. Tsy misy toetra indro kely.
Rehefa mitory izany, Tsy mahatsapa ny filàna ny tendron'ny rantsan-tongony manodidina na miala tsiny fa ny fahatezeran'Andriamanitra. Ary tsy tokony hahatsapa fa ilaina ny fialan-tsiny ny tsy kristianina namany momba ny fahatezerana na. Na ny Afobe. Ary tsy voatery ho menatra momba ny fitsarana ao amin'ny Testamenta Taloha tahaka ny sasany zava-miafina momba ny mpanota lasa tafaporitsaka.
Ny fahatezerany dia tsy ny fahotana. Izany ny fomba masina Andriamanitra mamaly amin'ny ota. Izany no hany valiny masina ho cosmic fikomiana sy ny famadihana tanindrazana avy amin'ny olona natao araka ny endriny. Aza miezaka ny hanaraka an'Andriamanitra ny fitsipika, satria Izy no faneva. Ny fahatezerany dia mpanota, satria isika mpanota. Fa Andriamanitra ho tanteraka Andriamanitra masina ihany no ho tezitra amin'ny fomba marina.
Ny fahotana no zavatra tokana izay mahatezitra an'Andriamanitra. Ary mahatezitra an'Andriamanitra foana. Ary ny mpanota rehetra dia tsy maintsy hamaly ho tezitra Andriamanitra, raha tsy toa ny fahatezerany mikendry azy ireo dia azo nikarakara.
fampiharana: Indraindray rehefa manota, isika dia alaim-panahy hieritreritra fa tsy ny ratsy. Fantatro talohan'ny Kristianina aho, ary na dia indraindray rehefa afaka izany,, Tsy mihevitra ny fahotana ho toy ny tena olana. Fa dia satria nieritreritra aho rehetra dia ny hoe efa nisy triatra ny sasany aho fitsipika. Aho hoe fitondran-tena tsy ampy. Tsara ny ota dia mihoatra noho ny tsy fahombiazana fotsiny mba ho ara-moraly ampy. Izany dia heloka manohitra ny olona - indrindra ny olona mahatoky. Ary Malahelo ny olona sy mahatonga azy ho tezitra. Andriamanitra mankahala ota.
Angamba izay tsy manome fahafaham-po anao na dia. Mety ny hevitrao Andriamanitra misafoaka koa. Aho hoe tena tezitra izy efa-polo taona? Toa izy mitazona ny lolompo. Re karazana madinika, Andriamanitra. Nahoana no manao Azy ka very saina? Tsara izay mitondra ahy mba hanondro roa.
II. Fahotana dia An Alternate Path
Jereo ny andininy 10 indray. Andriamanitra dia manome ny famaritana ny ity taranaka ity dia tezitra izy. Hoy izy, "Izy ireo no Olona maniasia amin'ny fony mania, ary tsy mahalala ny lalako. "
Andriamanitra, hoy izy ireo maniasia ao am-pony. Tsy maniasia fotsiny ety ivelany ny asa. Fa ny maha lalina indrindra, amin'ny ny fototry ny hoe iza izy ireo, mivily.
I mitranga ho mahatsiravina - I hoe tena mahatsiravina - miaraka amin'ny toro-lalana. Ny sisa angamba isan-kerinandro ny vadiko, dia handefa ahy any mba hahazo zavatra iray, na mitete na zavatra lavitra, ary tsy manao izany tsy niantso azy, na mitaky in-dimy aho raha mbola. Ary tsy noho ny toro-lalana ireo ratsy, dia satria manao ratsy nifandimby sy ny diso lalana handeha sy hatao nihodina.
Tsara izany no karazana ny sary izany voaloko eto rehefa Hoy izy am-pony handeha lalan-diso. Ny fony hidina any ny diso lalana, ary mitarika azy ireo ho any amin'ny toerana ratsy. Zareo very. Ary ny Toy izany koa ny fahotana rehetra. Ny fahotana rehetra dia mihoatra noho ny ivelany fotsiny, izany no mitranga satria ny fontsika mandeha ny diso toro-lalana. Ary ny zavatra manaraka.
Ary hoy ihany koa izy, "Tsy mahalala ny lalako." Ny toetran'Andriamanitra efa tamin'ny fampisehoana feno eo anoloany - ny famindram-pony sy ny heriny, sns. Ka nomeny didy ny hanaraka ny lalany, mba hanaraka ny lalana. Fa izy ireo fa nisafidy ny hanaraka lalana hafa. Izy no ilay iray izay namonjy azy tamin'ny Farao sy namaky ny Ranomasina Mena! Tena mampino fa izy ireo dia tsy matoky Azy rehefa hitany fa. Izy ireo nahita ny asa, nefa tsy fantany ny lalany.
Christian, ianao mahatsapa fa izao no ataonao rehefa manota? Fa ianao tsy latsaka intsony ny soavaly na ny ho avy fohy ny tsara indrindra vitany? Ianao misafidy hafa azo lalana ny olona izay efa niainga ho anao. Ianao hoe:, "Andriamanitra, Aho nahita ny lalanareo sy tsy tia azy ireo. Aho mahafantatra ny fomba tianao ny ho velona, ary mino aho fa ny fomba tsara kokoa. Izaho no hendry noho ianao, ary tsara kokoa noho ianao Tompo. I Handeha hifidy ahy ny lalana. "Izany no ratsy fanahy,. Ary izao no ataontsika isaky ny manota isika. Ny fahotana dia tsy misy tsara kokoa noho ny fahotan'ny fimonomononan ity, fifandirana, taranaka ratsy fanahy avy amin'ity lahatsoratra.
Tsy maintsy mieritreritra marina ny fahotana, na dia tsy hankahala azy toy ny tsy tokony. Ataovy izay rehetra ilaina mba hahita ny fahotana Rariny. Tena ratsy tarehy. Aza miezaka ny hanao izany tsara tarehy. Mety te-na dia hanova ny fomba miresaka momba izany. Tsy tokony hieritreritra fotsiny ny ota ho toy ny "Oh, I intsony ny ady. na ô, Miady mafy aho izany. "Tsy izahay nifidy ny tsy hankatò an'Andriamanitra. Nisafidy ny hanao zavatra hafa noho izay Andriamanitra nandidy antsika hanaraka, satria tsy toy ny zavatra tsy maintsy hoe. Izany no zava-misy ny fahotana ratsy tarehy. Ary na dia toy ny mpino izay te-hanao ny sitrapon'Andriamanitra, efa miezaka mafy mba hitandrina ny tsara fomba fijery eo amin'ny fahotana.
Ralph Venning manampy antsika hijoro eo ambanin'ny izany amin'ny Ota ny Ota raha hoy izy, "Raha afohezina, ny fahotana dia ny sahy ny ny rariny, ny fanolanana ny famindram-pony, ny jeer ny faharetana, ny kely ny heriny, ny tsinontsinona ny fitiavany. Mety handeha ka lazao, dia ny upbraiding ny fitondran'Andriamanitra, ny kosa maneso ny teny fikasana, ny fahafaham-baraka ny fahendrena. "
Ny fampitandremana ny Mpanao Salamo manome eto manomboka amin'ny teny, "Aza manamafy ny fonao." Raha tsorina dia heviny kokoa aza maditra sy mandà ny didin'Andriamanitra. Ary izany fampitandremana mihatra amintsika ihany koa. Izany no mahatonga ny mpanoratra ny Hebreo mitondra ity fizarana ity, ary mampitandrina ny Hebreo manohitra fihemorana.
Rehefa mikiry mandà ny didin'Andriamanitra, fo mahazo anao mafy kokoa sy mafy kokoa rehefa mandeha ny fotoana. Tena mafy fo matetika no mitranga ny sakan'ny ny fotoana ela, tsy nandritra ny alina. Ho isika mihevitra fa tsy ho ny tsara fanahy ny olona izay tsy mibebaka dia mifarana ao fahotana, fa afaka. Tena mafy fo hitranga rehefa mandeha ny fotoana, rehefa misafidy ny tsy hankatò an'Andriamanitra eo amin'ny zavatra madinika ny sy hatrany hatrany. Ny maso haingana eto, kely lainga any, ary rehefa mandeha ny fotoana dia lasa desensitized amin'ny ota sy hanomboka hanamarina izany. Ary raha tsy mbola fantatrao izany, isika vao mody, mandra reraka ny mody ka hijanona tsy hanaraka an'i Jesosy tanteraka. Ireo ady kely raha ny marina dia be.
Koa raha ianao eto androany ary mamela ny fahotana sasany mba hitoetra ao amin'ny fiainanao, mibebaka! ankehitriny! Manaiky ny fahotana ny hafa. Aza manomboka izao tsingerin'ny ny manamafy ny fonao. Tsy natoky ny lalanao, mahalala ny. Araho ny fomba. Matokia an'i Jesosy sy mino ny Teniny. Tia anao Izy ary homeny ho anareo didy noho ny soa. Araho ny lalana.
ok, ka ny fahatezerana dia tezitra amin'ny ota sy ny fahotana dia fisafidianana hafa azo lalana. De maninona? Inona no vokatry ny fisafidianana izany Alternate lalana?
Henoy ny andininy faha- 11.
Noho izany dia nanambara ny nianiana tamin'ny fahatezerako, "Izy dia tsy hiditra amin'ny fitsaharako mihitsy izy."
Ny vokany dia fa ny fahatezeran'Andriamanitra, Izy hamaly azy ireo. Ao amin'io toe-javatra manokana, Andriamanitra mamela azy ireo, nefa Izy tsy hamela azy ireo hiditra ny Tany Nampanantenaina. Saingy noho ny fotoana ny mpanao Salamo dia manoratra ity, Ny vahoakan'Andriamanitra efa niditra. Koa mampiasa andinin-teny ity mba hiresaka momba ny fitsaharana mandrakizay. Ary izao no fomba ny mpanoratra ny Hebreo dia mampiasa azy io koa. Andriamanitra dia manana fitsaharana mandrakizay fa afaka miditra, fa ny ota no manakana antsika tsy izany.
Hitantsika eto fa tsy hoe fotsiny no tezitra, fa Izy manao fanapahan-kevitra amin 'ny fahatezerany. Raha ny marina, ao amin'io andalana io dia manao fianianana eo ny fahatezerany. Izy no indrindra no iray amin'ireo teny notsongaina teo aloha milaza fa tsy hanao. Fa ny fahatezerany, Fa tsy mora niova hevitra toa antsika. Tsy ny milaza fa ny olona rehetra dia mpanota fahatezerana. Fa ny TSY dia. Hatezerana tsy hahafeno fifaliana Azy sy hanosika azy hanao fanapahan-kevitra adala. Tsy, Ny fahatezerany, Fa ambaratonga nankany, masina, ary mbola Mamaly soa sy ny rariny.
Fitsaharana mandrakizay an'Andriamanitra dia ny tsara tarehy, am-pilaminana, tsy saina, Andriamanitra nanome voninahitra toerana rehetra ny olona marina dia hiafara amin'ny. Ny fahatezeran'Andriamanitra dia ny masina, fotsiny, mahatsiravina, nampahatahotra anjaran ho an'ireo izay hahazo izay mendrika [reword]. Tsy misy fitsaharana ao amin'ny helo. Tsy misy fanampiana any amin'ny helo, afa-po sy ny fahatezerana. Ary isika dia tsy miresaka momba ny fahatezeran'ny miaramila na ny olona, fa ny fahatezeran'Andriamanitra no Andriamanitra mahery indrindra eo amin'ny lohany ho mandrakizay. Ny fahatezeran'Andriamanitra no tsy misy ao amin'ny Testamenta Taloha. Mbola mankahala ny ota androany. Tokony hatahotra mahavariana izany Andriamanitra. Ny fahotany dia nisakana azy tsy fitsaharan'Andriamanitra, ary ny antsika koa afaka.
Izany no ho an'ny olona rehetra ato amin'ity takariva ity. Rehefa avy ho faty, dia na hiditra amin'ny fitsaharan'Andriamanitra na hiaritra ny fahatezeran'Andriamanitra. Ireo no hany safidy roa. Isika rehetra mendrika ny safidy faharoa. Satria isika rehetra dia tahaka ny mpanota dia miresaka momba ny taranaka. Isika handeha amin 'ny lalana. Izahay maniasia ao am-pontsika sy tsy manaraka ny lalany. Izahay efa nanao ny tena zavatra mahatezitra an'Andriamanitra ny sy hatrany hatrany.
Koa Misy fanantenana ho antsika rehetra? Misy.
In 1 Thessalonians 1:10, Paoly dia mamaritra ny olona avy tany Galilia sy ireo teny ireo, "Ny Zanany avy any an-danitra, Izay natsangany tamin'ny maty, Jesosy, izay Mpanafaka antsika amin'ny fahatezerana ho avy. "
Ary taty aoriana tao 5:9-10 hoy izy ny mpino, "Fa Andriamanitra tsy nanendry antsika ho amin'ny fahatezerana, fa mba hahazo famonjena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompontsika, Izay maty hamonjy antsika, mba na mifoha isika na matory isika, mba hiara-belona aminy. "
Ny hany fanantenana dia i Jesosy. Ary tia antsika loatra.
"Izany no fitiavana, tsy ny nitiavantsika an'Andriamanitra fa ny nitiavany antsika, ka nirahiny ny Zanany ho avotra noho ny fahotantsika. " 1 John 4:10
Nisy kapoaka, tezitra feno fahatezerana sy ny fahatezerana fa Andriamanitra dia vonona ny hanidina anay. Fa ho an'ireo amintsika ao amin'i Kristy, tsy voatery hiaritra izany fahatezerana. Tsy, Andriamanitra efa izay kapoaka avy teo ambony lohanay, ary Izy no nahatonga izany. Ho an'ireo izay antsika ao amin'i Kristy, Ary nalainy ny fahatezeran'Andriamanitra fa nangoninao, nampidina izany rehetra izany ao anatin'ny iray kaopy, nataony teo ambonin'ny lohan'ny ny Zanaka ary nandraraka rehetra avy Aminy. Inona no be fitiavana! Niaritra i Jesosy ny nampahatahotra fahatezeran'Andriamanitra ho an'ny mpanota teo amin'ny hazo fijaliana. Maty tamin'izany hazo fijaliana, fa Nitsangana avy amin'ny am-pasana telo andro taty aoriana toy ny mpandresy Malagasy. Ary Jesosy dia nanao hoe:, "Come to me, rehetra izay miasa fatratra sy mavesatra entana, fa Izaho no hanome anareo fitsaharana. " (Matthew 11:28)
Soa ihany fa ireo izay mametraka ny fitokisany amin'ny ilay Jesosy- Andriamanitra tsy misy fahatezerana sisa ho antsika. ao amin'i Kristy, Andriamanitra intsony tezitra aminay. Izy no nalahelo noho antsika rehefa manota isika, Fa izahay tsy mba ho saziana ho azy ireo. Sambatra ny olona izay fahotana tsy isaina hamely Azy.
Ary raha mbola matoky ao amin'i Kristy, rehefa miverina afaka mandray Azy amin'ny fifaliana fa tsy ny fampihorohoroana. Ary isika dia afaka mihira, "Tahaka izany, dia soa ny fanahiko."
Evan • Febroary 2, 2015 amin'ny 9:41 PM • navalin'i
Misaotra anao, Trip. Te hahazo ny maka amin'ny zavatra satria hianareo efa teto olona izay nandray anjara toerana lehibe eo amin'ny mandeha miaraka amin'i Kristy. Izany dia ho lava, koa raha tsy mahazo ny manodidina azy, Azoko.
Rehefa lasa Kristianina taona vitsivitsy indray, ireo zavatra tsotra- matoky tanteraka an'i Jesosy, Andriamanitra forives anao amin'ny zavatra rehetra (lasa, ankehitriny, ho avy), fotsiny hatoky azy ary Izy no mpiandry ny sisa. Tsy mba manao fihetseham-po ny fototry ny finoana, fa niverina tamin'izany andro izany dia nisy fifaliana sy ny fankatoavana tsy tapaka dia tonga ho azy avy pieritreretana voavela aho tsy misy fepetra. Fotsiny zanak'osy izay natoky rainy ka tsy mila manahy ny ho tonga lafatra. Ny fifantohana dia eo amin'ny fankasitrahana rehetra ho an'i Kristy. Tsy mila miahiahy momba ny fahotana, satria ny fomba Nihevitra azy- ny asa dia ny hatoky an'i Jesosy, ny Fanahy Masina nikarakara ny sisa.
Rehefa nandany fotoana bebe kokoa ao an-teny, nisy soratra masina izay ho avy ka izay nanozongozona Izay matoky / fahasoavana fototra izay voalaza teo aloha, ka nitondra ahy niverina ny fahazazako. Indrindra fa ny raiko (izay mbola tanora amin'ny finoana tamin 'ny fotoana, ka tsy hazòny izy azy) Tena mailaka hanamafisana ny rariny tsy mahay mampifandanja izany amin'ny fampianarana ny momba ny famindram-pony. Ohatra, dia nampianatra ahy tamin'ny fotoana iray tena kely fa tsy maintsy mibebaka amin 'ny fahotako rehetra mba ho voavonjy, fa maro ny Kristianina ho any Ho taitra tampoka amin'ny Andro Fitsarana, satria mihevitra fa izy ireo dia handray azy ireo i Jesoa raha mbola mandika ny lalàn'Andriamanitra, sns. Be izy amin'ny fitenenana amin'ny tounges, maro ny zavatra hafa, fa tsy voa be ny matoky an'Andriamanitra anjara.
Rehefa nihamaro hatrany ireo fisalasalana tafiditra tao ary lasa tena liana tamin'ny teolojia, any ho any amoron-tsipika ataoko ho fianarana ny miezaka ny haka zavatra ao amin'ny ny fahefana sy mahatakatra ny zava-drehetra avy tsaina fa tsy hifandray akaiky sy miandry an'Andriamanitra. Dia tsy afaka milaza aminareo ny fomba ora maro aho nandritra ny fikarohana teolojika zavatra, voavaly ny fanontaniana, niandrandra ny andinin-teny amin'ny teny grika, sns. amin'ny aterineto ity tamin'ny taon-dasa. Ny heviny dingana efa “Tsara raha i Jesosy dia manana izany toe-javatra rehetra, dia tokony ho azo antoka fa mahafeno ny fepetra.” Noho izany, Lasa mandeha ny ara-tsaina sy perfectionistic. Inona no indray mandeha ka lasa tsotra sarotra tokoa, dia matoky ny mandringa, ary dia toy izany aho tamin'ny mbola fotoana tsara tarehy ny mavesatra ao amin'i Kristy ny mandeha amin'izao fotoana izao.
Hitako mifandanja toby roa mpanohitra ao anatin'ny Kristianisma ary mino aho fa mety hanaiky- 1) ny “fankatoavana” toby sy ny 2) Nandoa izany rehetra izany i Jesosy” toby. Ny fankatoavana toby dia haingana ny hanamafisana ny andraikitra sy matetika manondro ny synoptic Filazantsara, fanambarana, ny Testamenta Taloha, sns. Ny nandoa izany i Jesosy toby mampiady saina rehetra matoky azy irery ihany, ary toa tena miantehitra tanteraka tamin'i Paoly. Fony aho nanomboka voalohany nandeha amin'i Kristy, I tena nanana ny fisainana ny Camp 2, fa vao mainka aho nianatra ny Soratra Masina sy ny (mampalahelo, ny hevitry ny olona ao amin'ny aterineto) Taitra be aho be momba ny lasa misalasala ny fahatakarana ny fahasoavana izay nanova ny fiainako. Camp 1 lehibe ny nanindry mafy ny fahamarinana sy tsy miova toetra, fa toa miezaka mpanamboatra fankatoavana avy amin'ny nofo tsitrapo. Ho Reference zavatra toy ny “Tompo, Tompo… Tsy fantatro mihitsy ianareo” soratra masina. Camp 2 lehibe ny nanindry mafy ny famelan-keloka sy ny masoandro sy ny havana teny zavatra, Andriamanitra dia maneho fa toy ny hoe izy roa samy hafa tanteraka ny olona avy ao amin'ny Testamenta Taloha ho any NT. -Dry zareo fa na inona na inona momba afaka hampisaraka antsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra, ary ny karazana zavatra. Ny fahamarinana ho amin'ny toerana ao amin'ny voalanjalanja afovoany, marina? Ny tanjona dia ny mahalala an'Andriamanitra fotsiny fa iza izy, ary milaza fa Izy no manana fahatakarana ara-Baiboly rehetra voalanjalanja ny toetra. Aho manana ny fotoana sarotra indrindra mahazo miverina any matoky azy fotsiny, ary na dia nanana fifandraisana aminy foana aho satria manahy “tsy afaka mahatakatra ny zava-drehetra avy ny” (Aho miantehitra amin'ny fahalalanao eo an-tanako mafy). Ny zavatra tokana izay Mampahery ao amin'izao fotoana izao dia izao- Mahazo indray mandeha sy niresaka tamin'Andriamanitra sy ny matoky fa Izy no handray izany zavatra izany na aiza na aiza dia mila maka izany fotsiny aho, raha matoky azy hanao izany. Raha manana toe-javatra rehetra ireo, dia ny asa dia ny matoky fa ny fahasoavana hanampy ahy hihaona azy.
Fitiavana be, Trip.
Liz • Aogositra 10, 2016 amin'ny 8:52 aho • navalin'i
Hitako ny angst, ary marina ianao. Misy toby roa ankapobeny rehefa mijery ny sary lehibe. Misy aza mahay mandanjalanja, ary fantatro afaka mandray izany. Hoy izaho: mandray fa tsy hahita, satria ny Tompo dia milaza amintsika, “dondony, ary ny varavarana hovohana”. Ny fianarana ny Teny tsara, aza mijanona. saingy, ianao koa amin'ny alalan'ny vavaka? Aho dia tsy miresaka momba ny mivavaka amin'ny fahatsapana adidy na fanasan-damba lisitry ny fangatahana. saingy, tena mivavaka ao am-ponao. Fa zavatra mampihatra, Foana aho mianatra ny fomba hanaovana izany ny tenako tsara kokoa tato ho ato. voalohany, hidera an'Andriamanitra noho ny toetrany. Ary mangataka famelan-keloka, famelan-keloka manokana. Ary rehefa afaka izany hanatona ny seza fiandrianan'ny amin'ny olana, ahiahy sy ny enta-mavesatra. Entiny mandrarirary azy amin'ny fiderana kokoa. Misy ny sasany fampiharana lehibe avy any afaka manampy izany (Examen sy handinika). Samy fampiharana no vavaka fa ny namako tena kevitra. Tsy nanapa-kevitra ny hanao izay iray mbola. Soso-kevitra ihany koa aho mamaky ny boky, mafy, ny Priscilla Shirer. Namaky azy io aho amin'izao fotoana izao. Fa momba ny vavaka sy ny ady ara-panahy ary natao mba toy izany lehibe! Tena maso fanokafana. Aho mieritreritra bebe kokoa fa eo amin'ny fiaraha-monina tandrefana matory ara-panahy isika. Manana fomba ny fitenenana mahazatra ny vavaka sy ny ady ara-panahy dia angano – fa izany no tena tena rehetra. Hahita fiadanana amin'ny fivavahana – miresaka amin'Andriamanitra momba ny fanontaniana. Tsy maninona ny mametraka fanontaniana. Manantena aho fa ianao afaka mahita izany ary manantena aho fa manampy anao Evan!
Ny rahavavinao ao amin'i Kristy,
Jimmy Hayes Jersey • Novambra 24, 2015 amin'ny 12:42 PM • navalin'i
Keenan Allen Jersey • Desambra 12, 2015 amin'ny 12:17 PM • navalin'i
Misy be dia be avy any an-trano variances volley ivelan'ny trano miaraka amin'ny tora-pasika baolina. Ny zavatra sarotra indrindra ny mandray mahasoa raha ny marina no mifindra foward ny tena torotoro fo vato sokay. Ny tokotany tetika amin'ny ankapobeny fotsiny 3 dingana teknika izay mahitsy ka manomboka fa tsy handroso rehefa Manidina.